Ihe ị ga-ahụ na Mycenae | Akụkọ Njem
Susana Garcia | | General, Greece
Mycenae bụ ebe nyocha ihe ochie nke dị na Gris, kilomita ole na ole site na Atens na obi abụọ adịghị ya bụ otu n'ime saịtị ndị kachasị mkpa n'ụwa, n'ihi na ọ na-ewetara anyị foduru nke mmepeanya oge ochie. Ebe a dị ihe karịrị otu narị kilomita site na obodo Atens, mana ọ bụ otu n'ime nleta dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị nwere mmasị na akụkọ ihe mere eme na ihe niile ọ nwere ike ịgwa anyị.
Ka anyị lee ihe bụ isi ihe na-adọrọ mmasị na obodo ochie a nke Mycenae nke ahụ dị oke mkpa n’agbata afọ 1350 na 1250 a. nke C. Otu mmepeanya nke dị ka ndị ọzọ niile na-ada na mkpa maka ihe dị iche iche ruo mgbe ahapụ obodo ahụ n'ikpeazụ. Ma taa, ọtụtụ akụkụ nke ihe ọ bụ nke na-egosi ịdị mkpa ọ dị na-echekwawo.
1 Akụkọ banyere Mycenae
2 Ozi bara uru
3 Atreus Akụ
4 Ulo elu
5 Muselọ ihe ochie nke Mycenae
Akụkọ banyere Mycenae
Akụkọ ihe mere eme nke obodo a emeela ochie, ebe ọ bụ na ọ bụ ezie na oge ebube ya dị na afọ ndị a kpọtụrụ aha, enwere mpaghara obodo dị iche iche dị ka 3000 BC. nke C. Dị ka anyị na-ekwu, si N’afọ 1300 tutu amụọ Kraịst nke C. a ka nwere foduru nke na-egosi na nke a bụ oge nke ịma mma ya, ya na ili na obí eze. Ekwenyere na obodo a bụ isi ma na ọ na-achịkwa mpaghara ndị ọzọ, ọ bụ ya mere ha ji kwuo banyere oge Mycenaean, mana eziokwu bụ na taa ha ejighi n'aka ma mpaghara ndị ọzọ enwere onwe ha na nke a wee mee n'otu aka ahụ oge. Ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ịdị mkpa nke obodo a kwughachiri ruo ọtụtụ narị afọ mgbe e mesịrị. Na oge gboo ọ bi ọzọ rue mgbe ndị agha nke Argos wakporo ya na emesị biri na oge ndị Hellenist mana amaara na na narị afọ nke abụọ obodo ahụ bụ mkpọmkpọ ebe. Ọ bụ ezie na amaara ịdị adị ya ọtụtụ narị afọ, ọ bụ na narị afọ nke XNUMX ka ọrụ malitere ịmalite obodo ahụ na ịmụtakwu banyere akụkọ ihe mere eme ya.
Hụ ebe nrụọrụ Mycenae dị mfe. Ihe kachasị mma maka ịdị nwayọ nke njem ọha na eze enweghị mgbagha ịgbazite ụgbọ ala. Ebe ọ bụ na Atens anyị nwere ike ịnọ n'ime otu awa na ọkara na Mycenae. Uzo ozo bu iwere bọs ma obu zuta njem nleta nke gunyere njem. Echiche ikpeazụ a dị mma nke ukwuu, mana ọ dabere na anyị chọrọ ka ihe niile edozie tupu oge eruo ma ọ bụ ezumike ezumike. Banyere ebe obibi, ọ naghị adịkarị na gburugburu Mycenae. Nke kachasị dịkarịkarị n’obodo Nauplia.
Obodo Mycenae dị na a obere ugwu n’okpuru ụfọdụ ugwu. Ọbịbịa ahụ nwere ike iwe ọtụtụ awa ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhụ ihe niile n'udo. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịhụ ụzọ dị iche iche na ọnụ ụzọ dịka Treasury, nnukwu ụlọ elu na ụlọ ngosi ihe nka. Enwere ụbọchị ụfọdụ mgbe ịnweta bụ n'efu ka anyị nwee ike ịlele ya n'ọdịnihu.
Akụ nke Atreus dị maka 500 mita site na nnukwu ụlọ ahụ ma ọ bụ nnukwu ili Echere na ọ bụ nke ndị dị mkpa sitere n'oge ọla edo nke obodo ahụ. Agbanyeghi na amara ya dika Tom of Agamemnon n’ihi na na mbu ekwere na ya bu ili ya n’ezie, emesiri mata na obu ebe ochie, mana o gara n’iru idowe aha ya na mberede. E gwupụtara ya n’elu ugwu, ya mere ọ na-adọta uche ya na ọnụ ụzọ ya yana kwa n’ihi nnukwu akụkụ ya, yana nnukwu lintel, nnukwu okwute na nnukwu dome dị n’ime. Waschọ mma achọtara n'ili ahụ bufee ya na British Museum.
Nke a bụ akụkụ bụ isi nke saịtị ahụ, na kedu ebe oke ala obodo ochie nke Mycenae di. Njegharị ahụ nwere akwụkwọ mmado na mpaghara ndị isi yana nkọwa ịmara akuku ọ bụla. Ọ bụ obodo nke mgbidi gbara ya gburugburu na nke anyị nwere ike ịhụ isi ihe ndị dị mkpa dịka Puerta de los Leones a ma ama. Ọnụ ụzọ a bụ otu n'ime isi ihe dị na Mycenae nke ghọrọ akara nke saịtị ahụ. Ọ bụ ụzọ mbata n’obodo ahụ wee wuo ya n’afọ 1250 tupu a mụọ Kraịst. nke C. Nke a bụ naanị mpempe akwụkwọ dị egwu nke na-eguzo n'obodo Mycenae, ya mere ọ dị nnukwu mkpa. Nke a bụ otu n'ime akụkụ ndị anyị ga-ebu ụzọ hụ na ị ga-agafekwa iji hụ ụlọ elu.
Gafe n'ọnụ ụzọ, anyị hụrụ otu n'ime akụkụ ebe a hụrụ ili ochie. Edebere necropolis a maka eze, ya mere ọ pụtara maka mkpa ọ dị. ama m hụrụ ihe mkpuchi olili ozu, ngwongwo ili dị mkpa na ọkpụkpụ. E bugara ọtụtụ n'ime ihe a hụrụ ebe a na-akpọ National Archaeological Museum nke Atens maka nchekwa. N'ime ụlọ elu, anyị nwekwara ike ịhụ ihe ịma aka nke ụlọ nsọ, olulu mmiri na obí eze.
Muselọ ihe ochie nke Mycenae
Na njedebe nke nleta kpọọ anyị ka anyị hụ ebe a na-edebe ihe mgbe ochie. N'ime ụlọ ya atọ ị nwere ike ịhụ ụdị ihe niile dị n'ime ụlọ elu. Site na arịa ruo na ọla, ihe nkpuchi olili ozu ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ. Ọ bụ nleta ọzọ dị mkpa iji mara ntakịrị ndụ ụbọchị na obodo Mycenae.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Ihe ị ga-ahụ na Mycenae
Njem gaa na Ugwu Rocky